Featured - Setopati | Setopati Kala - Nepal's Digital Newspaper
एन्टन चेखव - म मान्छेलाई हाम्रो कल्पनामा वा मिथकमा भएको जस्तो वा हाम्रो आधुनिक स्टेजमा भएको जस्तो हैन। म वास्तवमा जस्तो छ त्यस्तै देखाउन खोज्छु। हाम्रो जीवन कृत्रिम घटनाहरू जस्तै भेटघाट, पार्टी¸ श्रम¸ खानेकुरा र बेकारका कुराकानीहरूबाट बनेको छ। मेरो नाटकहरू पनि त्यस्तै छन्। यदि मान्छे ऊ कसरी बाँचिरहेको छ भन्ने कुरामा सचेत भैदिएको भए, सम्भवत मैले त्यसको बारेमा नाटक लेख्नु पनि पर्दैन थियो होला।
नवराज लम्साल - पाँच जनाको फरक फरक विशेषता पाएँ। प्रचण्डको व्यवस्थित सचिवालय, केपी शर्मा ओलीको गम्भीर अध्ययन, भट्टराईको पठन संस्कृति, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको शालीनता र शेरबहादुर देउवाको प्रष्टबोलीबाट म प्रभावित भएँ। केपी ओलीले ६ घण्टा आफ्नो घरमा राखेर ७ कप चिया खुवाएर साहित्यको जुन तहको विश्लेषण गर्नुभयो, म चकित छु। विश्वविद्यालयमा ४० वर्ष नेपाली साहित्य पढाएका सरहरूलाई भन्दा नेपाली साहित्यका बारे केपी ओलीलाई बढी थाहा छ। भट्टराईको कुनै पनि किताब पढ्दा किताबलाई न्याय हुने गरी चालीचाली पढ्न सक्ने र तर्क दिने क्षमता देखेर म अचम्मित भएँ। उहाँले नढाँटी भन्नुभयो– आधाआधी पढुन्जेल त्यति डुबेर पढिनछु आधाबाट उकालो लागेपछि खूब स्वाद लाग्यो।
आफू अभिनित पात्रलाई उभ्याएर हरिवंशले ल्याए उपन्यास
अनिश रेग्मी, काठमाडौं, बैशाख २४ - ‘हाम्रो समाजमा हरिबहादुर जस्ता चलाख तर नकारात्मक पात्रहरु सबैतिर प्रभावकारी बन्दै गइरहेका छन्,’ उनीहरुको नाटककै एक परिचित पात्र हरिबहादुरमा आधारित उपन्यासबारे बोल्दै मदनकृष्णले भने, ‘त्यस्ता पात्रहरुको भेद खोल्दा त्यसले पाठकहरुलाई रोचक गतिविधिसँग नजिक्याउँदै समाजलाई सचेत हुन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु।’
फिरिरि घन्काउँदै विमल
काठमाडौं, वैशाख २४ (सेतोपाटी) - पोखरेली गायक विमल पराजुली एक दशक पछि दोस्रो एल्बम लिएर झुल्किएका छन् । संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिठानका कूलपति सरुभक्तले राजधानीको सर्बनाम थिएटरमा शनिबार उनको एल्बम फिरिरि विमोचन गरेका छन् । पराजुलीको एकल गायन र संगीत रहेको फिरिरि एल्बममा प्रकट पगेनी (शिव), बिजय राज पौडेल, रमेश सुबेदी, चिरञ्जिवी आचार्य र जय गौडेलका शब्द छन् । सबै गीत प्रणय भावमा आधारित छन् । रचना वाचनको सहकार्यमा अनाम मण्डलीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरुभक्त, रुपक अलंकार र सरोज घिमिरे लगायतले एल्बमको गीतमाथि चर्चा गरेका थिए ।
टेरियापछि मलिसा गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको फाइनलमा
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख २४ - डिज्नी च्यानललले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता 'सोए लुना-डाईन् आउफ्ट्रीट्' मा नेपाली मुलकी मलिसा गुरुङ उत्कृष्ट पाँचमा छनौट भएकी छिन्। गायन र नृत्यकला सम्बन्धी उक्त ट्यालेन्ट शोको अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि उनी छानिएकी हुन्।
‘बाहुबली २’ हेर्न पूर्व–राजपरिवार सुन्धाराको फिल्म हलमा
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख २३ - ‘बाहुबली २’ को यति चर्चा भइरहेको छ, त्यसले पूर्व–राजपरिवारलाई समेत छोडेन। शुक्रबार साँझ उनीहरु फिल्म हेर्न सुन्धारास्थित सिटिसी मलमा रहेको सिने डी सेफ हल पुगेका थिए।
एमाले उमेदवारलाई भोट माग्दै मतदाताको घर-दैलोमा राजेश हमाल
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख २३ - तर, नजिकिँदै गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि भने उनी एमाले उमेदवारलाई भोट माग्न घरदैलो चाहारिरहेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २६ मा एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्षका उमेदवार देवेन्द्र रिमाललाई उनले भोट माग्दै हिँडेका हुन्। शनिबार उनले उमेदवार र कार्यकर्तासँगै मतदाताको घरघर पुगेर भोट मागे। बताइएअनुुसार रिमाल हमालका छिमेकी हुन्।
अमर न्यौपाने - यात्रा गर्दा एकै दिनमा त सयौं ठाउँमा मोडिनु पर्छ भने जिन्दगीको लामो यात्रामा कति धेरै ठाउँमा मोडिनु पर्ला? चाहेर होस् या नचाहेर प्रत्येक मानिसले अनेक ठाउँमा मोडिनुपर्छ, छोडिनुपर्छ, तोडिनुपर्छ। कहिलेकाहीं जोडिनु पनि पर्छ। कहिलेकाहीं अब मेरो जिन्दगी ओरालो मात्र लाग्ने भयो। म सकिने भएँ भन्ने लागेको बेलामा उकालो आउँछ र जिन्दगीको यात्रा उकालोको भइदिन्छ। कहिलेकाहीं अब मेरो जिन्दगी उकालो मात्र लाग्ने भयो। म सधैं सफल हुने भएँ भन्ने लागेको बेलामा ओरालो आउँछ र जिन्दगीको यात्रा ओरालो भइदिन्छ। जिन्दगी भनेकै कि मोडिनु कि उक्लिनु कि ओर्लिनु रहेछ।
हाङयुग अज्ञात - पछिल्लो समयमा उनले श्रीस्वस्थानी ब्रत कथाको 'क्राफ्ट'लाई नेपाली मौलिक सिनेमाको हकमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छन्। रामायण र महाभारतबाट मात्र सिनेमाको बनोट झिकिआएकोमा स्वस्थानीबाट पनि सिनेमाको क्राफ्ट निकाल्दा झनै गजब हुन्छ। मलाई त के लाग्छ भने 'नाम्सामी-केसामी'को मुन्धुमबाट पनि सिनेमाको क्राफ्ट निकालियो भने यो कार्यले नेपाली सिनेमाको विकासमा अहम् भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ। साहित्य, दर्शन, कला र सिनेमाका सिद्धान्तहरू खोज्न हामी बाहिर गयौं। तर, हाम्रै घर आँगनमा रहेछ हामीलाई चाहिने सिद्धान्तहरू, सम्भवत: क्राफ्टहरू पनि। एरिष्टोटलको 'पोइटिक्स'ले हाम्रो समाजको तिर्खा मेटाउन कहाँ सक्नु?
घिमिरे युवराज - युवाहरुको उपस्थिति उल्लेख्य छ। तर, उत्साहजनक हिसाबले बढेको छैन। नाटक हेर्ने दर्शकहरुको संख्या धेरै कम छ। शिल्पीको नाटकघरमा एक पटकमा २ सय दर्शकले नाटक हेर्न सक्छन्। एक महिनासम्म नाटकघर भरिँदा पनि जम्मा ६ हजारले नाटक हेर्छन्। काठमाडौंको जनसंख्याअनुसार यो संख्या लाजलाग्दो हो। तर जति दर्शक छन् यी पनि निक्कै दुःखले बनेका हुन्। यो पनि एक धारको दर्शक छ। काठमाडौंमा कुनै वैकल्पिक धारको फिल्म वा नाटक चल्यो भने हेर्ने दर्शक निकै सीमित हुन्छन्। नुमाफुङ, सेतो सूर्यजस्ता फिल्मले काठमाडौंका सिनेमाघरहरुमा दर्शक पाउन सक्दैनन्। हामीलाई नाटकको बलियो प्रचार–प्रसार चाहिन्छ तर त्योसँगै राजनीतिक र सामाजिक स्थितिमा पनि सुधार आउनु आवश्यक छ। सबैथोक भताभुङ्ग भएको अवस्थामा रंगमञ्च मात्रै व्यवस्थित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
करोड पटक हेरियो ‘काले दाइ’ (भिडियो)
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, वैशाख २३ - निर्देशक राउतका भनाइमा फिल्ममा आइटम गीत राख्नु थियो। दिनेश आफैं लेख्न बसे। उनले सोचे, केही फरक गर्नुपर्छ। ‘अधिकांश आइटम गीतमा बारमा नाच्नेले आफ्नै सुन्दरताको बयान गरेको सुनिन्छ,’ राउत भन्छन्, ‘मैले सोचेँ, बारमा नाच्नेले गेस्टको प्रशंसा गरेको गीत बनाउँदा कसो होला?’ गीत लेख्दा कसले गाउने, को नाच्ने भन्ने उनको दिमागमा थिएन। उनले यत्ति सोचेका थिए, काले दाइ भन्ने पात्र कालो वर्णको हुन्छ।
सेतोपाटी संवाददाता, वैशाख २१ - महोत्वसमा विभिन्न समयका उत्कृष्ट ठहरिएका नेपाली फिल्महरु जस्तैः नवीन सुब्बा निर्देशित ‘नुमाफुङ’, छिरिङ रितार शेर्पा निर्देशित ‘मुकुण्डो’ ‘लुकिङ ब्याक नेपाल सेक्सन’ शीर्षकअन्तर्गत देखाउन लागिएको फेस्टिभलका निर्देशक पूर्णसिंहले जानकारी दिए। नेपाली पानोरामाअन्तर्गत भने राजन कठायतको ‘शेरढाक’, सुवर्ण थापाको ‘सुनगाभा’, देवकी विष्टको ‘इन सर्च अफ देवकी’, अम्बिका जोशीको ‘टासिज टरबाइन’, गणेश पाण्डेको ‘भाग्यले बाँचेकाहरु’ र किरण मरहट्टाको ‘जर्नी टु वार्सा’ प्रदर्शन हुने उनको भनाइ छ।
दया–प्रियंकाको ‘लाल्टिन’ ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, वैशाख २१ - फिल्ममा दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी, अर्जुनजंग शाही, ए. गुरुङ, शिशीर भण्डारी, मेलिना मानन्धर, रामकेशर बोगटी, जनक बर्तौला, भानुप्रताप, मोहनबहादुर श्रेष्ठ, कमल आले, नवीन शाह, सुनील कटुवाल, रिया श्रेष्ठ, लीला मायालगायतले अभिनय गरेका छन्।
‘आधा लभ’ बाट ऋचा शर्मा बनिन् निर्माता, ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख २१ - अभिनेता/अभिनेत्रीहरु फिल्म निर्माता बन्ने लर्कोमा अभिनेत्री ऋचा शर्मा पनि थपिएकी छन्। डेब्यु फिल्म फस्ट लभपछि लुट, को आफ्नो, टलकजंग भर्सेस टुल्केजस्ता फिल्मकी अभिनेत्री शर्माले खुसुक्क ‘आधा लभ’ बनाएकी छन्। जुन फिल्मको ट्रेलर बिहिबार सार्वजनिक भएको छ।